China Owuwu Okirikiri Uhie China Manufacturers & Suppliers & Factory
Owuwu Okirikiri Uhie - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Owuwu Okirikiri Uhie)
25W Anyanwu Kwadoro Ụzọ Nzọụkwụ Ụzọ
Nke a na-eme 25W Azụmahịa Landscape nke Ahịa dị iche iche ka a ga-esi na-arịgo n'elu ogwe osisi dị. Ụzọ Njegharị Ụzọ dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Ngwaahịa a na-ere ahịa a pụrụ iche nke kwadoro ebe a na-adọba ụgbọala mbadamba. Nke a pụrụ iche nke anyanwụ...
20W ìhè nke okirikiri na-achịkwa anyanwụ N'abalị, 20W mere ka ìhè ọkụ na-acha ga-emegharị ma na-enwu ọkụ na-acha ọkụ na-acha site na mpempe mmiri mmiri ozuzo na-enwu ọkụ nke 140 lumens na ụgwọ zuru ezu. Nke a Mere Nchịkọta Post elu ga-agbanye na-akpaghị aka ozugbo anyanwụ dara ma gbanyụọ mgbe anyanwụ rutere. Ọ...
75W Na-enwupụta Uhie Mpempe akwụkwọ Post maka ụzọ ugbo
75W Na-enwupụta Uhie Mpempe akwụkwọ Post maka ụzọ ugbo Atụmatụ: 1. duru Post kacha elu ọkụ Ịchekwa ikike, gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe a na-ahụ maka ogwe ọkụ ihu -egwu, mgbochi mmiri, enweghị nchapụ, ọ dịghị ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị...
50W Igwe okirikiri na-achịkwa anyanwụ
50W Igwe okirikiri na-achịkwa anyanwụ N'abalị, anyanwụ na-eduzi nkwụsị elu ga-agbanye na-achagharị ọkụ ma na-enwu ọkụ site na mpempe mmiri mmiri ozuzo na-egbuke egbuke nke 140 lumens na ụgwọ zuru ezu. Osisi Uhie nke 50W a ga-agbanye na-akpaghị aka ozugbo anyanwụ dara ma gbanyụọ mgbe anyanwụ rutere. Ọ bụrụ na ogwe...
Igwe Uwe Mgba Igwe Uhie 150w
Igwe Uwe Mgba Igwe Uhie 150w 1. Uwe ụlọ ntanye ọkụ 150w ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. 150 Umu Umu Umu Ohu bu ihe ohuru mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo oge...
100w Ngosipụta Uwe Okpomọkụ Uhie
100w Ngosipụta Uwe Okpomọkụ Uhie 1. Uwe ihe nkedo Uhie Obere Motion 100w ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. 100w LED Wrecklight Light bụ ọhụrụ mara imewe. Obere na ibu na...
75w Okpokoro Ogige Uhie Ọhụụ 9750lm
Bbier 75w Daylight Garden Pole Light 9750lm nwere nnukwu na-egbukepụ egbukepụ ọkụ na-arụ ọrụ 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a Ìhè Garden osisi Light 75w nwere ezi heatsink imewe gosiri maka 50000 awa nke ndụ. Nke a 75w Diana n'èzí Ìhè dị mma Mee 2-3 / 8 nke anụ ọhịa na 3 anụ ọhịa ahụ dị mfe iji...
150w Uhie N'èzí Ìhè Na-adọba ụgbọala Lot
Nke a 150w LED N'èzí Ìhè Na-adọba ụgbọala Lot bụ nnọchi anya maka 400W HID ma ọ bụ HPS Fixtures. Zọpụta ike, ego, na oge site na-eme ka ọkụ ọkụ gaa na ọkụ. Na 150 Watts na ọnụ ọgụgụ lumen nke 19500, ogige ntụrụndụ, ebe ndị na-adọba ụgbọala, ogige egwuregwu na n'okporo ámá ga-anọgide na-enwe nchebe ma...
75w Uhie N'èzí Ọhụụ Na-adọba ụgbọala Lot
Bbier 75w Uhie N'èzí Ìhè Na-adọba ụgbọala Lot nwere oke na-egbuke egbuke na elu lumens irè 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a n'anwụ n'èzí Ìhè Na-adọba ụgbọala Lot 75w nwere ezigbo heatsink imewe rapụtara maka 50000 awa nke ndụ. Nke a 75w Diana n'èzí Ìhè dị mma Mee 2-3 / 8 nke anụ ọhịa na...
50w Uhie N'èzí Ìhè Na-adọba ụgbọala Lot
Bbier 50w LED N'èzí Ìhè Na-adọba ụgbọala Lot bụ nnukwu na-enwu gbaa na elu lumens irè 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a n'anwụ n'èzí Ìhè Na-adọba ụgbọala Lot 50w nwere ezigbo heatsink imewe rapụtara maka 50000 awa nke ndụ. Nke a 50w LED N'èzí Ìhè kwesịrị ime 2-3 / 8 nke anụ ọhịa na 3 anụ...
30w Uhie Na-enwu n'èzí Na-adọba ụgbọala Lot
Bbier 30w Uhie N'èzí Ìhè Na-adọba ụgbọala Lot nwere oke na-egbuke egbuke na elu lumens irè 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a ikanam Post Top Street Light 30w nwere ezigbo heatsink imewe ahapụtara maka 50000 awa nke ndụ. Nke a 30w LED N'èzí Ìhè dị mma Mee 2-3 / 8 anụ ọhịa na 3 anụ ọhịa ahụ mfe mfe...
100W Ogwe Uhie Top-13000lm
Bbier 100W LED Pole Top -13000lm na -egbukepụ egbuke egbuke na-arụ ọrụ dị ogo 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a na- acha ọkụ ọkụ Top-13000lm nwere ezigbo heatsink imeziri maka 50000 awa nke ndụ. Nke a 100W LED Pole Top kwesịrị MEE 2-3 / 8 anụ ọhịa na 3 anụ ọhịa pole mfe iji wụnye ọkụ ụgbọala, ọkụ na ụzọ....
50W Egwuregwu Uhie Elu - 6500lm
Bbier 50W Pịkụl Ugo - 6500lm na -egbukepụ egbukepụ ọkụ na-arụ ọrụ 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a n'ahịrị uhie a - 6500lm nwere ezigbo ihe ngosi heatsink e mere maka oge 50000 nke ndụ. Nke a 50w LED Pole Top kwesịrị ime 2-3 / 8 nke anụ ọhịa na 3 anụ ọhịa ahụ mfe mfe ịwụnye ọkụ ụgbọala, ọkụ na ụzọ....
30W Ogwe Uhie Elu 3900 lm
Bbier 30W Ogwe Osisi Uhie Top 3900 Lm nwere nnukwu ihe na-egbukepụ egbukepụ ọkụ 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a n'osisi okporo ọkụ a - 3900lm nwere ezigbo heatsink imeziri maka 50000 awa nke ndụ. Nke a na-eme ka ogwe osisi 30W dị elu DI 2-3 / 8 anụ ọhịa na 3 anụ ọhịa ahụ dị mfe iji wụnye ọkụ ọkụ,...
150w LED Ogige Uhie 18000 Mkpụrụ
Owuwu Okirikiri Uhie Ndabere Okirikiri Uhie Ejiji Owu Osimiri Uhie Mgbawa Okirikiri Ala Okpokoro Osimiri Uhie Mgbagwoju Anya Okirikiri Okpomoku nke okirikiri kacha elu 30N Ugwu Ochie Uhie